Niaiky i Apple fa telo taona ny fihodinan'ny iPhone | Avy amin'ny mac aho
Niaiky i Apple fa telo taona ny tsingerim-piainan'ny iPhone
Applelised | | About us, maro
Betsaka ny zavatra voalaza momba ny fahanterana efa nomanina, saingy tsy mbola nisy mpanamboatra nanaiky izany, hatrizay, avy amin'i Apple, tamin'ny andron'ny Tany de Hatao amin'ny 22 aprily io, hanambarana izay atao hoe fihodinana fiainana iPhone, iPad ary Mac.
Tsingerin'ny fiainana, hiadian-kevitra
Mety efa natahotra ianao, fa milamina, tsy dia ratsy loatra, ho hitanao. Amin'ny fotoanan'ny Andro Tany sy ny lakolosy fa Apple, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha maro ary miaraka amin'ny WWF dia manatanteraka, dia namoaka karazana hitari-dalana izay ampahafantariny ny mpampiasa momba ny angon-drakitra samihafa momba ny tontolo iainana sy ny fomba anampian'ny orinasa hikarakarana azy, fa eo amin'ity fampahalalana ity, ny iray nanintona ny saina dia ilay mifandraika amin'ilay tsingerin'ny fiainana fitaovana.
Nanaiky izany i Apple ny tsingerin'ny fiainana ao amin'ny iPhone dia telo taonaraha ny fihodinan'ny Mac dia efa-taona. Nahatratra an'ity fehin-kevitra ity ny orinasa tamin'ny fandrefesana ny lafiny samihafa toy ny herin'ny tombam-bidin'ny lanin'ny vokatra tsirairay, ny salan'isa ampiasaina, sns.
Mba hanomezana modely ny fampiasan'ny mpanjifa, dia refesinay ny herin'ny lanin'ny vokatra iray raha mbola mandeha amina scenario namboarina izy. Ny lamina fampiasa isan'andro dia miavaka amin'ny vokatra tsirairay avy ary mifangaro amin'ny tahiry fampiasana mpanjifa tena izy sy maodely. Ny fampiasana an-taonany, izay mifototra amin'ny tompona voalohany, dia heverina fa efa-taona ho an'ny fitaovana OS X sy TVOS ary telo taona ho an'ny fitaovana iOS sy watchOS.
Midika ve izany fa afaka telo taona dia hijanona tampoka ny fiasan'ny iPhone-nao? Tsia, lavitra azy io. Rehefa miresaka momba izany isika fihodinana fiainana amin'ny fitaovana iray, amin'ity tranga ity ny iPhone, iPad na Mac, dia miresaka momba ny fotoana novinavinaina nandritra izany fotoana izany isika izay nilaza fa hiasa tsy mila fanovana na fanamboarana ataon'ny mpampiasa, raha toa ka mazava ho azy fa natao izany ho an'ny fampiasana ara-dalàna, izany hoe tsy apetrantsika ao anaty microwave mba hahitana raha manohitra izy na manipy azy amin'ny asfalta avy amin'ny rihana fahadimy.
Aorian'io vanim-potoana io dia toa mitaky fanamboarana, fanoloana singa, sns sns ilay fitaovana.
Tsy fialan-tsiny izao. Apple dia manao ezaka lehibe amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana dia tsy isalasalantsika izany, fa na izany aza, ity fihodinana fiainana Somary zara raha ho antsika izy io, na dia ambony lavitra noho ny ankamaroan'ny fifaninanana aza izy io.
Heverinao ve fa tokony hanitatra ny tsingerim-piainan'ireo fitaovany i Apple? Afaka manao bebe kokoa noho ny amin'ny tontolo iainana ve i Apple?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Niaiky i Apple fa telo taona ny tsingerim-piainan'ny iPhone
Lvismy dia hoy izy:
Mac minis dia mahatratra 10 taona lavorary, ny maro an'isa ary amin'ny fampiasana mitombina, ireo avy amin'ny 2015 dia mbola miasa tsy misy fanovana.
Valio i Lvismy
Lady Lady dia hoy izy:
Ao an-trano dia manana IPad 1 izahay, na dia manana IOS taloha aza, dia miasa tanteraka, ary koa IPhone 3GS roa vonona hampiasa indray. Afa-tsy ny iray lena lena ary tsy maintsy namboarina, tsy mbola sahy nanao ny serivisy teknika mihitsy izy ireo. Izaho koa dia manana iPad 2 izay vao nohavaoziko. Heveriko fa mihoatra ny 3 taona ny tsirairay. Oh, ary 2009 iMac izay milalao tsara miaraka amin'ny Kapiteny.
Valiny tamin'i Lady Templar
Asier Eizagirre Ibarzabal dia hoy izy:
Manana iPhone 5s aho, iPad 2 ary farany manana ilay 27 5K iMac aho. Ny iPad dia efa tsy manana panache, okay, fa ny iPhone sy ny iMac dia afaka manipy taona maro hafa.
Valiny tamin'i Asier Eizagirre Ibarzabal
Jony Ive dia namolavola iPad iPad mavo hanangonam-bola ho an'ny tranombakoka
Patent Apple dia mampiseho trackpad Backlit azo atao amin'ny MacBook ho avy